Mimwe michina yekuveza michina Vagadziri - China Imwe michina yekuveza michina Fekitori & Vatengesi
Linyi Mingding International Trade Co. maitiro ekugadzira, kutengesa uye mushure-kutengesa-sevhisi.
Ukanyatsotarisisa peeling And Cutting ...
chokurukisa huni peeling muchina
makorari sanding muchina
Plywood ndeimwe yezvinhu zvinowanzo shandiswa zvemidziyo uye chimwe chezvinhu zvitatu zvakakurisa huni-yakavakirwa mapaneru Iyo inogona zvakare kushandiswa kune ndege, ngarava, zvitima, mota, kuvaka uye kurongedza nezvimwewo Plywood inogona kuvandudza mashandisirwo ehuni. Iyo nzira huru yekuchengetedza huni.
Muchina unodzorwa neCCC chirongwa, chiri nyore, zviri nyore uye zvakavimbika kushanda, zvine yakakwira michina.
Isu tinoshandisa iyo yekukanda nzira kuburitsa muviri furemu. Yeparutivi furemu iri kushandisa yenyika yakajairwa simbi mbiri ndiro uye yemukati lining mabara akasimba, ayo anovimbisa zvizere kudzikama kwekugarika kwemuchina.Inotivimbisa hapana vibration, hapana deformation.
cambered yakasarudzika-yakasarudzika makorari muchina mhando nyowani unoshanda uye unoshanda huni pamusoro pekugadzirisa michina.Muchina uyu unotora yepamusoro-magumo kupinza zvishandiso zvine hungwaru kugadzirisa zvachose kunyatso kwehuni bhodhi kukorobha, kunyanya iko kwepakutanga kukororisa kunyatso, iyo inorumbidzwa zvikuru ne vatengi vekumusoro-soro.
kumucheto kucheka saha
Muchina uyu urikushandisa Siemens servo mota, PLC otomatiki control system. Kumhanya kwacho kwakatsetseka uye kunoshanda uye kwakanyatsojeka. Inoiswa pakucheka mativi emarudzi ese emabhodhi senge HPL, PVC furo bhodhi, plywood uye mdf nemamwe mapuranga emapuranga.
Saizi yakajairika yekucheka kwenguva refu: 915-1220mm (inogadziriswa), kutenderera kwekucheka 1830-2440mm (inogadziriswa) .Mamwe masikisi akagadziridzwa akanaka kubhuka.